Puntlandtimes (Boosaaso)-Madaxweynaha dowladda Puntland Siciid Cabdullaahi Deni oo diyaarad gaar ah ka raacaya garoonka diyaaradaha Garoowe ayaa maanta oo Jumce ah booqasho ku tegaya magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari.
Siciid Cabdullaahi Deni, madaxweynaha Puntland ayaa u tagaya magaalada Boosaaso sidii uu wax uga ogaan lahaa xogta weerarkii xalay ay Al-shabaab ku qaaday Xabsiga Dhexe ee Boosaaso oo ssiweyn looga hadal hayo Puntland iyo guud ahaan Soomalaiya.
Dad badan oo baraha bulshada kaga faalooday weerarkii xalay lagu qaaday xabsiga Boosaaso ayaa dowladda ku dhaliilay, waxaana dowladda loogu baaqay inay qaadato mas’uuliyadda weerarkaasi oo u muuqday mid dhacay xilli ciidanka ammaanku aysan heegan kujirin.
Ninkan dani ah waxaa u
Egyahay nin jahaweer
Kujiro talada aan ku
Sinaayo waxaa wayaan dadka
Kahorleexo kuwii ku dortay
Kuma aay mahadin runtii
Puntland waad lagegtay
Aad baan ogaxumaday in aay
Puntland noqoto furin oo
Dadkii aay isnacaan puntland
Nabadii waad kaqaaday ee
Raligalin bixi oo hordhaaf
Puntland u dhutin mayso weerarada argagixisda. Dowlad iyo Shacbiga Puntland ayaa si wada jir ah marsiina argagixida iyo waxa la midka ah waxa ay mudanyihiin. Kaligii taliye Ismaqiiqe farmaajo iyo kuwa xanuunsan si weyn ayey uga naxeen jabkii ku dhacey kooxda shabaab iyo mujrimiintii kale ee la midka ah.
Hambalyo ciidanka difaaca Puntland in argagixisada iyo kuwa taageera aad cashar u dhigteen sidii laydinku yaqaanay. Allah ha u naxariisto mujaahidiinta nagaga shihiiday shilkaa argaggixisada iyo taageerayaashooda.
Madax weyne Deni iyo xukuumaddiisa waxaa laga rabaa inay argagixisada jeelasha ka daaayaan oo meesha lagu arko lagu toogto. Maxaad ka maxkamadaynaysaa oo bariis kasiinaysaa argagixiso.
Midda kale, kuwa Xalay weeraray ciidamada ammaanka iyo kuwa Farmaajo taageersan ee Xarrago, Ali Daacuun iyo kuwii Boosaaso ka qaylinayay waa isku mid waana in gacan bir ah lagu qabtaa
Punt land wa habar bariweyn siil weyn jawasiis iyo dhabadilif tuugo sh